Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngololiwe » Uloliwe omtsha wexabiso eliphantsi ukusuka eLondon ukuya e-Edinburgh
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iindaba zaseScotland • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Uloliwe omtsha wexabiso eliphantsi osuka eLondon ukuya e-Edinburgh unokuphazamisa kaloliwe kunye neenkonzo zomoya
Uphando lwakutsha nje luveze ukuba i-11% yabaphenduli behlabathi ngoku banebhajethi yeholide engaphantsi kune-COVID yangaphambili, kwaye i-37% ayinakukwazi ukuya eholideyini kungekudala ukuze inkonzo entsha enexabiso eliphantsi yamkelwe.
Ukumiliselwa kukaLumo kwexabiso eliphantsi kuhlangabezana nohlahlo-lwabiwo mali kunye nenkxalabo yendalo esingqongileyo.
Imodeli yenkonzo kaloliwe enexabiso eliphantsi inokuba yinto ethandwa kakhulu ngabahambi.
Nangona inkonzo ibiza ixabiso eliphantsi, iWi-Fi yasimahla, kunye nokuzonwabisa okufunwayo kuya kufumaneka kubo bonke.
Ukuphehlelelwa kukaLumo kweenkonzo zikaloliwe ezinexabiso eliphantsi kunokuphazamisa iinkonzo zikaloliwe nezomoya zangoku phakathi kweLondon ne-Edinburgh. Imodeli yayo enexabiso eliphantsi ecaleni kokugxila ekunciphiseni ifuthe kwindalo esingqongileyo iya kuba yindlela elungileyo yokutshintsha imeko yabahambi njengoko icandelo lichacha kubhubhane.
Inkonzo kaloliwe enexabiso eliphantsi kaLumo inokuduma. Abahambi base-Bhritane sele beqhelene nexabiso eliphezulu kunye neenkonzo ezikumgangatho ophantsi ezazithi, ngaphambi kwe-COVID, zihlala zixinene. Ukuphehlelelwa kwendlela entsha yomqhubi wohlahlo lwabiwo mali phakathi kwe-Edinburgh neLondon kulindeleke ukuba kube yinto ephazamisayo ngenxa yokunqongophala kokhuphiswano phakathi kwabasebenza ngololiwe UK. Nangona ixabiso eliphantsi, i-Wi-Fi yasimahla, kunye nokuzonwabisa okufunwayo kuya kufumaneka kubo bonke. Ngamaxesha ohambo kuphela yimizuzu eli-10 ubude kune-LNER esele ikho, uLumo ukwindawo entle yokufumana inzuzo kwimakethi yokhuphiswano.
Ngolwabiwo-mali ololuliweyo, ukungeniswa kwenkonzo kaloliwe enexabiso eliphantsi kuyakudlala kakuhle nabahambi abanemali-mboleko ngelixa imfuno yasekhaya inyuka e-UK. Amaxabiso aphantsi aya kubaluleka ekuphenduleni kumaxabiso anyukayo abahambi. Uninzi luye lwaziva ukulunywa yimali ngenxa yalo bhubhani lubangela ukomeleza uhlahlo-lwabiwo mali lwamakhaya kunye nohambo. Kwangokunjalo, iziphumo zoPhando lwaBathengi lowama-2021 ziveze ukuba i-62% yabaphenduli base-UK 'babexakeke kakhulu', 'kancinci', okanye 'bexhalabile' malunga nemeko yabo yezemali, ukuqinisa ngakumbi isidingo seenkonzo zikaloliwe ezinendleko eziphantsi.
Ukhuphiswano lukaLumo lwe- $ 15 (iUS $ 20.78) indlela yokufumana ixabiso ephantsi inokukhuthaza imfuno yokuhamba phakathi kweLondon ne Edinburgh. Iindleko eziphantsi zisetelwe ukubiza ixabiso eliphantsi kunenqwelomoya enexabiso eliphantsi kwaye zinokubeka uxinzelelo kukhuphiswano kwiJetJet kwaye, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, Airways British. Ixabiso ngundoqo ekutsaleni isiko ngexesha le-COVID-19 yokufumana kwakhona, kwaye uLumo unemodeli efanelekileyo yeshishini yokuphumelela.
Abahambi baya ngokuya bechatshazelwa yindlela imveliso okanye inkonzo enobume bendalo esingqongileyo. Uvavanyo lwabathengi lwe-Q1 2021 luveze ukuba iipesenti ezingama-70 ze UK abaphenduli 'bahlala', 'bahlala', okanye 'ngamanye amaxesha' bephenjelelwa yile nto.
Ukugxila okunzima kukaLumo ekubeni kukusebenza kwendalo, ubungqina bexesha elizayo kwimodeli yeshishini. Abahambi abebedla ngokubhabha phakathi kwezi zixeko zibini banokuthi baphambukiselwe kulwalamano olunobungqongileyo nolungabizi kakhulu. Ukukhetha ukuhamba kuloliwe ohamba ngombane opheleleyo kaLumo ngokubhabha kuya kunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni koluhambo ukuya kwisinye kwisithandathu sendiza, ngokutsho komqhubi. Ukuqinisekisa kwakhona ukugxila kwindalo esingqongileyo, umqhubi uya kubonelela nge-50% yokutya okusekwe kwizityalo kwaye ikwi-100% yedijithali ukunqanda inkunkuma yamaphepha. Ngenxa yenkxalabo yokusingqongileyo emiselwe ukukhula, intshukumo inokubona uLumo esiba ngumqhubi kaloliwe oqondayo ngokusingqongileyo.
I-Etihad Airways yandisa ukuqinisekiswa kuxwebhu lokuhamba ngenqwelomoya ...
Ukufudusa i-UNWTO ukusuka eMadrid ukuya eRiyadh itywina ...
Ikhontrakthi yemiqondiso yeHans Airways neQela loLungiselelo lomoya
I-Qatar Airways yandisa inethiwekhi yase-US ukuya ngaphezulu kwe-100 ngeveki ...
Abakhweli bakaloliwe abali-12 babulawa, aba-5 benzakala zizikhukula
I-Phuket Sandbox: I-UK ikhokelela ekubuyiseni abakhenkethi baseYurophu ...